फेरि दौडिँदैछ धरान ! - Social Video Khabar
धरानः नेपालमा नै सबैभन्दा बढी धावकधाविका सहभागी हुने नेवाः च्यारिटी ८ के रन यसपटकदेखि धरान १० के रन २०७५ दौड प्रतियोगिता हुने भएको छ ।
धरान रनको आयोजनामा हुने प्रतियोगिता यही फागुन २५ गते हुने आयोजकले शनिबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत् जानकारी गराएको छ । पहिले ८ कि.मि दौडनुपर्ने प्रतियोगिता यसपटक सहभागीहरूले १० कि.मि. दौडनुपर्नेछ । १० के रन प्रतियोगिता अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नै हुने प्रतियोगिता भएकोले ८ कि.मि. बाट बढाएर १० कि.मि. वनाएको धरान रनका प्रवक्ता गोपाल राईले जनाए । ‘हाम्रो प्रयास १० के रन प्रतियोगितालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन रहेको हो ।’ उनले भने । अहिले नेपालभरि बाट मात्र धावकहरू प्रतिस्पर्धाको लागि आउने गरेको छ । भविष्यमा यस प्रतियोगितामा विदेशबाट पनि धावकहरूलाई प्रतिस्पर्धाको लागि सहभागी गराई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने लक्ष्य रहेको धरान रनका अध्यक्ष रोमु राईले जनाए ।
प्रतियोगितामा खुला प्रतिस्पर्धा, ४० वर्ष उमेर माथिका भेट्रान, १२ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म र १२ वर्षसम्मको फरक फरक प्रतिस्पर्धा हुने आयोजकले जनाए । १२ वर्ष मुनिकाले ३ कि.मि.मात्र दौडन पर्नेछ । खुला तर्फका प्रथम, द्वितीय र तृतीयले क्रमशः नगद ४० हजार, ३० हजार र २० हजार, मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त गर्नेछ । भेट्रानतर्फ र उमेर समूहका प्रतिस्पर्धी प्रथम, द्वितीय र तृतीयले क्रमशः नगद ७ हजार, ५ हजार र ३ हजार रूपैयाँ, मेडल र ट्रफी प्राप्त गर्नेछ । साथै ६० वर्षमाथिका धावक धाविका विजेता र धरानका स्थानीय धावक धाविका ५ स्थानसम्म आउने प्रतिस्पर्धी विजेताले समेत विशेष पुरस्कार प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाए । यसपटक देखि टप ५०० भित्र दौड पूरा गर्ने धावक धाविकालाई मेडल र प्रमाण पत्रको व्यवस्था रहेको छ । अनुमानित २१ लाख रूपैयाँको बजेट रहेको १० के रन प्रतियोगितामा यसपटक तीन हजार धावकधाविका सहभागी गराउने लक्ष्य आयोजकले लिएको छ । गत साल छैटौ नेवा च्यारेटि ८के रनमा २५ सय जना धावक धाविकाले सहभागिता जनाएका थिए ।
१० के रन दौड प्रतियोगिता भानुचौकदेखि शुरु भएर पुतली लाइन हुँदै दुर्गाचौक, वुद्धचौक, रत्नचौक, मङ्गलवारे, कल्याणचौक, पानी ट्याङकी, गणेशमान चौक, रङ्गशाला, जिरोपोइन्ट, अमरहाट, रेडक्रस भवन, हात्तिसार, विजयपुर चौक, पिण्डेश्वर मन्दिर, चिनियाँ चौक, पुरानो बजार, देशीलाइन हुँदै भानुचौकमा समापन हुनेछ ।
दौड प्रतियोगिताबाट उठेको रकम नेवा एजुकेशन फण्डमा जम्मा हुनेछ । हाल धरान रनद्वारा सञ्चालित एजुकेशन फण्डमा ६ लाख रूपैयाँ रहेको आयोजकले जनाए । फण्डबाट आएको ब्याजले १७ जना विपन्न, असहाय र जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरी पढाइरहेको आयोजकले जानकारी गराए । यसपटकको दौड प्रतियोगिताबाट एजुकेसन फण्डको रकमा ६ लाखबाट १० लाख रूपैया पुरयाउने र आउँदो नयाँ शैक्षिक सत्रमा १७ जनाबाट ३० जनालाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने लक्ष्य आयोजकको रहेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा छात्रवृत्ति पाएका १७ जना विद्यार्थीहरुलाई जाडोमा लगाउने स्वीटर र स्टेशनरी समान समेत धरान रनले वितरण गरेका थिए ।
Prevनेपाली प्रेमिका भेटन काठमाडौं आए यी बिदेशी युवक, कसरी बस्यो माया ? (भिडियो)
Nextधरानको सुनसरी टेक्निकल र धरान आदर्शका विद्यार्थी झोलुङ्गे पुल र झाडीमा (हेरौं भिडियोसहित)
श्रीमान बिदेशमा, एकछोराकी आमा अबिबाहित भन्दै अर्कै युबकलाई फसाई गेष्टहाऊसमा मस्ती, आखिरमा यस्तो भयो
श्रीमान बिदेशमा श्रीमती अर्कै संग कोठमा नाङ्गै रङ्गे हात प्रकाउ ! भिडियो हेर्नुहोस
बुढा हुदा हुदै देवरको हेरचार बढी गर्न थालेपछी…हेर्नुहोस् भिडियोपुरा हेर्न फोटो मा किलिक गर्नु होला